1 ခြံ (Y) = 0.9144 M (M) 1 လက်မ (1 ") = 2.54 CM (CM) 1 ခြံ = 36 လက်မ 1 ပေါင် (LB) = 454 ဂရမ် (ဆ) 1 အောင်စ = (OZ) = 28.3 ဂရမ် (ဆ) )
Denny number - အမျှင်အရှည် ၉၀၀၀ အရှည်ရှိပြီးအမျှင်ရှည်ရှည်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အလေးချိန်မှာ ၁ ဂရမ် (ဆ) ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့် ၁ ဒန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ D ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၇၀ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိသောအရှည် ၉၀၀၀ အရှည်ရှိပြီး ၇၀ ဒန်ဖြစ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ဓာတုဖိုင်ဘာအထူကိုကိုယ်စားပြုသည်။
၂။ အတိုင်အရေအတွက်နှင့်အတိုင်နှင့်ဖောက် ၀ င်မှုအရေအတွက် - အထည်၏သိပ်သည်းဆကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာစတုရန်းလက်မတစ်လျှောက်လျှင်အတိုင်နှင့်ယက်ခြင်း၏နံပါတ်များကိုအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ“ T” ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ အထည်ရက်လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏အရေအတွက်ကိုဂရုပြုပါ၊ ရက်အရေအတွက်အတိအကျကိုတိုင်းတာနိုင်ရန်အတွက်ရက်ကန်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေကိုရှာပါ။
၃။ နံပါတ် (F) ။ အတိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကြိုးတစ်ခုစီတွင်ကြိုးအမျှင်များစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ နံပါတ် F သည် ၀ ါချည်နံပါတ်များကိုကိုယ်စားပြုသည်။ ၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ“ F” ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်ပါးနပ်လေလေခက်ခဲလေလေဖြစ်သည်။
(၄) အဓိကချုပ်ထားသောကြိုး၏အကျယ် - ယေဘုယျအားဖြင့်“ ချည်” ကိုအသုံးပြုခြင်း၊ ချည်ထည်အရှည် ၈၄၀ ကိုက်ရှိသောပေါင်ကိုဤကြိုးအားအင်္ဂလိပ်အက္ခရာ“ s” ဖြင့်ခေါ်သည်။ ချည်သည် ၂၁ နှစ်ဖြစ်သည်။ (ပြောင်းလဲပြီးနောက် - 21S = 250D)
အတိုင်အထူ / F ×ယက်အထူ / F ဖြစ်သည်
အတိုင်အရေအတွက် + ယက်ကြိုးအရေအတွက်
70d/ 36,f* 70 / / 36, f
× 60“ 70D × 190T × 60 70 အထိအတိုချုံ့နိုင်သည်။
118 t + 80 t ကို
၁။ သဘာဝအလိုက်အမျိုးအစားခွဲခြားခြင်း (ဘုံခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်)
အမျှင်များကိုသဘာဝအမျှင်များနှင့်ဒြပ်အမျှင်များခွဲခြားနိုင်သည်။ သဘာဝအမျှင်များသည်ပိုးချည်၊ ပိုက်ဆန်၊ သိုးမွှေးစသည်တို့ပါဝင်သည်။ အတုအမျှင်များသည်နိုင်လွန်၊ ပိုလီယက်စတာ၊ အက်တိတ်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအသုံးအများဆုံးအမျှင်များကိုအသေးစိတ်မိတ်ဆက်ထားသည်။
အေနိုင်လွန်ခ။ နိုင်လွန်ဂ။ နိုင်လွန်။ ။ Nylon Nylon ကို“ နိုင်လွန် ၆” နှင့်“ နိုင်လွန် ၆၆″” အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ “ နိုင်လွန် ၆၆ physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများသည်“ နိုင်လွန် ၆ than” ထက်ပိုကောင်းပါတယ်။ စျေးနှုန်းကပိုပြီးစျေးကြီးသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်အဖြူရောင်မီးခိုးထုတ်လွှတ်သည့်မီးနှင့်အတူမုန်ညင်းအရသာရှိသည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အက်ဆစ်ဆိုးဆေးဖြင့်ဆေးဆိုးသည်။
B, Polyester: အင်္ဂလိပ်သည်“ Polyester” ဖြစ်ပြီးယေဘုယျအားဖြင့် T ဟုဖော်ပြသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေတွင်မီးခိုးငွေ့များပါရှိခြင်း (သို့သော်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်နိုင်လွန်ကော်ပြီးနောက်မီးခိုးငွေ့လည်းအနက်ရောင်မီးခိုးများဖြစ်လာသည်၊ ထို့ကြောင့်ခွဲခြားသိမြင်ရန်သတိပြုပါ။ ) ပိုမိုမြန်ဆန်စွာမီးရှို့ခြင်း၊ အနံ့ဆိုးများကိုအနံ့ခံနိုင်သည်။ ဆိုးဆေးဆိုးဆေးများကိုများသောအားဖြင့်ဆေးဆိုးခြင်းအတွက်အသုံးပြုသည်။ အရောင်ပြောင်းခြင်းနှင့်သူတော်ကောင်းတရားအစာရှောင်ခြင်းကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
C. လဲမှို့။ ချည်ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်မီးဖြင့်မီးလောင်မှုမြန်နှုန်းနှေးကွေးသည်၊ မီးလျှံသည်အဝါရောင်ဖြစ်သည်။ ချည်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုကျွမ်းဝင်သောအရသာကိုလောင်ကျွမ်းစေသည်။ သဘာဝဝါဂွမ်းပြာများသည်အဖြူရောင်ဖြစ်သည်။ Rayon ပြာများသည်များသောအားဖြင့်အနက်ရောင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတို့အားလုံးသည်တူညီကြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ဓာတ်ပြုခြင်းသို့မဟုတ်တိုက်ရိုက်ဆိုးဆေးများနှင့်အတူဆိုးဆေး။
) ထိုကဲ့သို့သော polyamide / polyester interwoven (N / T), polyamide interwoven (T / N), polyamide interwoven (N / C), polyamide interwoven (C / N), polyester / ဝါဂွမ်း interwoven (T / C) ကဲ့သို့သော: ။ , ဝါဂွမ်း - polyester interwoven (C / T) နှင့်အခြားဖိုင်ဘာ interwoven အမျိုးအစားများ။ ဥပမာ၊ “ N / C” သည်“ အတိုင်သည်နိုင်လွန်၊ ယက်သည်ဝါသည်”၊ “ C / N” သည်“ အတိုင်သည်ဝါ၊ နောက် ... ပြီးတော့။
အီး၊ acetate ဖိုင်ဘာ၊ သိုးမွှေး၊ လျှော်ပိုးနှင့်အခြားအမျှင်များလည်းရှိသည်။ ရောစပ်မှုများလည်းရှိသည်။ Tencel ဖိုင်ဘာ (အင်္ဂလိပ် Tencel၊ အရွက်များကုန်ကြမ်း viscose ဖိုင်ဘာအဖြစ်) ။
ယက်လုပ်ခြင်းနည်းလမ်းအရ၎င်းကိုရက်ကန်းထည်၊ ချည်ထိုးထည်နှင့်ယက်မဟုတ်သောအထည်အဖြစ်ခွဲခြားထားသည်။ ၎င်းကိုအောက်ပါအတိုင်းထပ်မံခွဲခြားနိုင်သည် -
A. ဇာထိုးခြင်း: ပုံမှန်အားဖြင့်မြို့ပတ်ရထား knitting နှင့်အတိုင်ဇာထိုး
ခ။ ရက်လုပ်ထည် - အထည်သည်ယက်လုပ်ခြင်းနှင့်ယက်ခြင်းတို့ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ Warp နှင့် Weft Interlacing ၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများအရ၎င်းကို Taffeta, Twill, Sattin နှင့် Dobby စသဖြင့်ခွဲခြားနိုင်သည်။ (မှတ်ချက် - plain weave, twill နှင့် satin ရက်များသည်ယက်လုပ်ခြင်း၏“ မူလတစ်ရှူးသုံးခု” ဖြစ်သည်) နှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင်သူတို့သည်အမျိုးမျိုးသောပုံစံများကိုဖွဲ့စည်းရန်အတိုင် (သို့) ယက်ပေါ်တွင်ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်လက်တွေ့ကျသောအလုပ်များတွင်လေ့လာရန်နှင့်နားလည်ရန်လိုအပ်သည့်ပြောင်းလဲမှုများစွာရှိသည်။
C. Non- ယက်ထည်: ကယက်ခံရခြင်းမရှိဘဲတိုက်ရိုက်ကော်နှင့်အမျှင်များ၏ချုံ့ခြင်းဖြင့်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
တစ် ဦး က, FDY, DTY, ATY ။ FDY ရက်လုပ်သောထုတ်ကုန်များသည်နိုင်လွန်၊ DTY မှယက်လုပ်သောထုတ်ကုန်များမှာနွေ ဦး ချည်များ၊ မက်မွန်သားမွေးများ၊ အနိမ့်ကျသောအောက်စ်ဖို့ဒ်အထည်စသည်တို့ပါဝင်သည်။ စသည်တို့ကို ATY ကိုယက်လုပ်ခြင်းများအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများထုတ်လုပ်ရန်အထက်ပါနှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောစတိုင်များလည်းရှိသည်။
B, အလင်းတစ်ဝက်, မျိုးသုဉ်းခြင်းနှင့် flash ။ Semi-light သည်ပိုမိုသဘာဝကျသည့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ အထူးကုသမှုမရှိပါကအမျှင်သည် semi-light ဖြစ်သည်။ အ ၀ တ်အထည်သည်သဘာဝဖိုင်ဘာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စေရန်အတွက်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိသောအလှဆင်ခြင်း Flash သည် fiber မ်ားထုတ်လုပ်နေစဉ်အတွင်း fibre များကိုရောင်ပြန်ဟပ်နေသောအလင်း၏အာရုံကိုသူတို့ရဲ့တြိဂံများအားတြိဂံပုံဖြစ်စေခြင်း (သို့) အမျှင်များ၏မျက်နှာပြင်ကိုချောမွေ့ခြင်းအားဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
1, Taffeta: နိုင်လွန် Taffeta အထူ, polyester Taffeta, Polypolyester ရောစပ်ထားသော Taffeta, အထွေထွေအခြေအနေ - ချည်မျှင်၊ အထည်မျက်နှာပြင်အလင်းနှင့်ချောချောမွေ့မွေ့အတော်အတန်ပါးသည်။ နိုင်လွန် 70D × 190T, 210T, 230T; နိုင်လွန် 40D × 290T, 300T, 310T × Polyester 75D * 190T, 68D * 190T; Polyamide polyester interwoven 40D × 50D × 290T, etc ၎င်းသည် FDY ကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
၂။ အောက်စ်ဖို့ဒ် - နိုင်လွန်အောက်စ်ဖို့၊ အောက်စဖို့ poliester နှင့်အောက်စ်ဖို့ဒ် tasilong ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်, ချည်သည်ခိုင်ခံ့မှုရှိပြီးပိုထူပြီးပိုထူသည့်အထည်ကဲ့သို့သောနိုင်လွန် 210D၊ 420D နှင့် 840D (FDY အတန်းပိုင်) ။ Polyester 150D, 300D, 600D, 1200D (DTY အတန်းပိုင်)၊ polyester 210D, 420D (FDY လူတန်းစား); Taslon 200D × 300D, 400D × 500D (ATY အတန်းပိုင်) စသည်တို့ဖြစ်သည်။
၃။ Taslon - နိုင်လွန် Taslon၊ Polyester Taslon နှင့် Oxford Taslon ။ အထွေထွေအခြေအနေ - ရက်ကန်းယက်ချည်သည်ပိုထူသည်၊ အထည်မျက်နှာပြင်သည်ပိုမိုကြမ်းတမ်းသည်၊ ၎င်းသည်ကြွယ်ဝမှုနှင့်ဝါဂွမ်းချည်ခြင်းခံစားချက်ရှိသည်။ ကဲ့သို့သော: နိုင်လွန် taslon
မစ္စတာ Zheng (306949978) 10:23:21
70D * 160D * 178T, 184T, 228T, taslon 320D, 640D, taslon Oxford 200D * 300D, 400D * 500D စသည်တို့ဖြစ်သည်။
4. Spring subtextile (Pongee): ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းသည် polyester DTY ကြိုး (50D မှ လွဲ၍) နှင့်ပျော့ပျောင်းသောခံစားမှုဖြစ်သည်။ ဥပမာ polyester spring subtextile 75D * 190T, 210T, 240T, 50D * 280T, 290T, 300T, etc ။
၅။ Trilobal: နိုင်လွန်တဖာ၊ polyester taffeta၊ poly-polyester interlace flash - တောက်ပမှုနှင့်နှစ်ကြိမ်လျှပ်တပြက်နှင့်အတူ ni flash 70D * 190T, 210T, polyester flash twill စသည်။ သီးခြားအတိုင် (သို့) ယက်ကုံးအား Flash silk ဟုခေါ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော Flash ဟုခေါ်သည်။
6, Twill (Twill): Twill အတွက်အထည်မျက်နှာပြင်စပါး, Twill အထည်ယေဘုယျအားဖြင့်အတိုင်နှင့်ပိုး၏ပိုကြီးတဲ့သိပ်သည်းမှု။ ထိုကဲ့သို့သော: နိုင်လွန် twill 70D * 210 * 230T, 272T, 290T, polyester dj မှ 75D * 75D * 230T, 260T နှင့်ရောနှော Twill ။
၇။ ယက်လုပ်ခြင်း - brocade / polyester interweave (N / T)၊ brocade / cotton interweave (N / C), polyester-cotton interweave (T / C) စသည်ဖြင့်။ နိုင်လွန်နှင့် polyester FDY, DTY သို့မဟုတ် ATY တို့ဖြစ်နိုင်သည်။ Semi- တောက်ပ, Matte သို့မဟုတ်တောက်ပ။ ၎င်းတို့အနက်ဝါဂွမ်းချည်မျှင်များကိုအများအားဖြင့်ခြုံ။ တစ်ပိုင်း၊ တီးမှုတ်၊ ဖြီး၊
8. Peach skin (Microfiber) - Microfiber လို့လည်းလူသိများသည်။ ထိုကဲ့သို့သော polyester မက်မွန်သားရေ 43022 (75D * 240T), 43099 (75D * 150D * 220T), 43377 (twill, 75D * 150D * 230T), စသည်တို့ကို
10. ထို့အပြင်အထက်ပါအထည်မျိုးစိတ်များ၏အပြောင်းအလဲများအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းခဲ့ရာဇမတ်ကွက် (Ripstop), jacquard (Dobby) စသည်တို့ရှိပါတယ်။
အလုပ်၌ထည်သတ်မှတ်ချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၏တိကျမှန်ကန်မှုကိုအမြဲတမ်းဂရုပြုရမည်၊ အမှားသည်မှန်းဆ။ မရသောဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်နှင့်အမျှထည်သတ်မှတ်ချက်ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းကိုလေ့လာခြင်းနှင့်အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏စုပ်ယူမှုကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ , တိကျသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအောင်မြင်ရန်သေချာစေပါ။
၁။ ထည်၏ဂုဏ်သတ္တိများ - နိုင်လွန်၊ ပိုလီယက်စတာ၊ ချည်၊ N / C၊ T / C စသည်။
2. ချည်ဂုဏ်သတ္တိများ: FDY, DTY, ATY စသည်တို့
၃။ စတိုင် (ရုပ်အသွင်အပြင်လက္ခဏာများ) - ရိုးရှင်းသောရက်လုပ်ခြင်း၊ အမြွှာ၊ ချပ်၊ ဖဲယက်ခြင်း၊ Dobby စသည်ဖြင့်
(က) ရိုးရှင်းသောရက်ခြင်း - တစ်ခုတည်းအတိုင်နှင့်တစ်ချောင်း၊ နှစ်အတိုင်နှင့်နှစ်ချီ၊ နှစ်အတိုင်နှင့်တစ်ခုတည်းအတိုင်နှင့်နှစ်ကြိမ် (နှစ်ဆယက်ကြိုး) စသည်ဖြင့်
ခ twill: 1/2, 1/3, 2/2, 2/3, etc
ကို C, ရာဇမတ်ကွက်: လျှို့ဝှက်သောရာဇမတ်ကွက်, floating ရာဇမတ်ကွက် (နှစ်ခုလိုင်း float, သုံးလိုင်း float) နှင့်လည်းရာဇမတ်ကွက်၏အရွယ်အစား, ဇယားကွက်ထဲမှာ meridional နှင့် zonal လိုင်းများ၏နံပါတ်နှင့် floating ဇယားကွက်လိုင်း၏ floating point ရက်လုပ်ခြင်းအာရုံစိုက်။ ။
sat ဖဲအတွက်၊ မည်သည့်ယက် (သို့မဟုတ် Weft) သည်အတိုင် (သို့မဟုတ် Weft) ပေါ်သို့ပေါ်လာပြီးမည်မျှ Weft (သို့မဟုတ် Weft) သည်အတိုင် (သို့မဟုတ် Weft) နစ်မြုပ်သနည်း။
အီး, Dobby အမျိုးမျိုး, ရက်ကန်းထည်၏နိယာမ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုကို။
Denny count သို့မဟုတ် yarn count: medd, weft နှင့်သက်ဆိုင်ရာ F count ။
5, အတိုင်နှင့်ယက်သိပ်သည်းဆ: ထည်ယက်လုပ်ခြင်း၏ဥပဒ, တိကျမှန်ကန်ရန်နံပါတ်နှင့်တွက်ချက်မှု၏နားလည်မှုသေချာပါစေ။
6. Semi-light, မျိုးသုဉ်းသို့မဟုတ် flash ။
၇။ အထည်အကျယ် (pinhole အတွင်းရှိအပြင်ဘက်အကျယ်ကိုဂရုပြုပါ။ ကော်နှင့်အခြားပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ပြီးနောက်ကုန်ချော၏ထိရောက်သောအကျယ်ကိုလည်းဂရုပြုပါ) ။
Vi ။ သမားရိုးကျမျိုးစေ့ဖြန့်ဝေခြင်း (နောက်ဆက်တွဲ)
အခန်း (၂) အထည်ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်အပြီးသတ်ခြင်း၏အခြေခံအသိပညာ
သန္ဓေသားစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ဆေးချုပ်ထားသည့်သန္ဓေသားအထည်၏ခြောက်သွေ့မှုကိုခြောက်သွေ့စေခြင်း၊ စစ်ဆေးပြီးသည့်နောက်တွင်အပြီးသတ်ခြင်း (ပုံသွင်းခြင်း၊ ကော်ခြင်း၊ ပြက္ခဒိန်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ တံဆိပ်ကပ်ခြင်း၊ PVC ကပ်ခြင်း၊ PU သားရေ၊ ပေါင်းစပ်ခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်းစသဖြင့်) ။
၁) လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုချင်းစီ၏နိဒါန်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအာရုံစူးစိုက်မှု -
အေ။ သန္ဓေသားအထည်တစ်ထည်ကိုကြီးမားသောလိပ်တစ်ခု (သို့) A box ထဲ၌ချုပ်ထားသည်။ အေဆလင်ဒါ၊ ဆလင်ဒါအရေအတွက်သည်ထည်အပြောင်းအလဲနှင့်အညီကွဲပြားသည်။
ခ။ သန္ဓေသားစစ်ဆေးခြင်းသည်အဓိကအားဖြင့်သန္ဓေသားအထည်၏အရည်အသွေးကိုထိန်းချုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံများ၊ ပုံ၊ ယက်၊ အသေ၊ အဝါရောင်အစက်၊ အစက်အစရှိသည်တို့ကဲ့သို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောအရာများရှိမရှိကြည့်ရှုရန်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ထည်လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ပုံမှန်အခြေအနေများတွင်သုတ်နံပါတ်လိုအပ်သည်။
ခ။ ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်းမရှိပါကဆေးဆိုးပြီးနောက်အရောင်အစက်အပြောက်များ၊ ပျော့ဖတ်အစက်များနှင့်အခြားချွတ်ယွင်းမှုများရှိလိမ့်မည်။
C. ယေဘုယျအားဖြင့်, Desizing ပြီးနောက်, အထည်ကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းစေသင့်တယ်, မဟုတ်ရင်မြင့်မားသော PH တန်ဖိုးမြင့်ထည်ဆိုးဆိုးရွားရွားစွန်းလိမ့်မည်နှင့်အခြားမူမမှန်ပေါ်ပေါက်လိမ့်မယ်။
(there) ယေဘုယျအားဖြင့် desizing နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ In-cylinder desizing နှင့် long-car desizing ။ ယေဘုယျအားဖြင့်ယခင်သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သော desizing အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသော်လည်းစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်သည်။
က) ပုံမှန်အပူချိန် - ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၀၀ below အောက်၊ အဓိကအားဖြင့် Semi-lested nylon taffeta, nylon Oxford, nylon twill စသည်တို့ဆေးဆိုးခြင်းအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်။ ဤနည်းသည် ဦး ခေါင်းနှင့်အမြီး chromomatic aberration၊ ဘယ်၊ အလယ်နှင့်ညာ chromatic aberration, crease နှင့်ထုတ်လုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ အခြားမူမမှန်။
ခ။ အပူမြင့်လိမ်းဆေးဆိုးခြင်း - အပူချိန်ယေဘုယျအားဖြင့် ၁၃၀ about ခန့်ရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့် polyester taffeta, N66, နိုင်လွန်ဖျာ၊ poliester Oxford (filament) စသည်တို့ကိုဆေးဆိုးရာတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။ အလယ်နှင့်ညာအရောင်ခြားနားချက်, တွန့်, အရောင်အမှတ်နှင့်အခြားမူမမှန်။
C. Overflow dyeing: အပူချိန် ၁၀၀ မှ ၁၃၀ ℃ခန့်ရှိပြီးအဓိကအားဖြင့် polyester ထုတ်ကုန်များ၊ နွေ ဦး အထည်အလိပ်၊ မက်မွန်အရေပြားကတ္တီပါ၊ poliester Oxford, tullon, polypolyester interweave စသည်ဖြင့်ဆေးကြောရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ဤအတောအတွင်းနိုင်လွန်နှင့်အရေးအကြောင်းများကိုပါသောအခြားထုတ်ကုန်များကိုဤနည်းဖြင့်လည်းအသုံးပြုသည်။ ဤနည်းသည်အရောင်ပန်းပွင့်များ၊ D. အတိုင်ဝင်ရိုးဆေးခြင်း - အထည်အမျိုးမျိုးအတွက်သင့်လျော်သော်လည်းအရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များအရသင့်လျော်စွာအသုံးပြုသင့်သည်။ ဆေးဆိုးသောအပူချိန်ကို ၁၀၀ 130 မှ ၁၃၀ than ထက် ပို၍ can ထိန်းချုပ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ရေတိမ်ပိုင်းအနားများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအလွှာများကဲ့သို့သောကွဲလွဲချက်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။
(၂) အခြားအထည်များဆေးဆိုးခြင်းနည်းလမ်းများ -
အေ။ ချည်ဆေးဆိုးခြင်း - ယေဘုယျအားဖြင့်ကားရှည်ဆေးဆိုးခြင်း (ပမာဏများစွာလိုအပ်သည်)၊ လှိမ့်ဆေးဆိုးခြင်း (ခွင့်ပြုချက်အမြောက်အများသို့မဟုတ်ပမာဏ နည်း၍)၊ လျှံဆေးဆိုးခြင်း (အလယ်အလတ်သို့မဟုတ်သေးငယ်သည်ပမာဏခွင့်ပြုသည်) ။ (ကောင်းသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူ) ဓာတ်ပြုဆေးဆိုးများ (ကောင်းသောအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူ) တိုက်ရိုက်ဆိုးဆေးများ (အကောင်းဆုံးအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူ) ရရှိနိုင်ပါသည်။
B, N / C, C / N ဆေးဆိုး: လျှံဆိုးဆေးယေဘုယျအားဖြင့်မွေးစားသည်။ လဲမှို့ကို ဦး စွာဆေးကြောပြီးလျှင်နိုင်လွန်ကိုဆေးဆိုးသည်။ ဓာတ်ပြုနိုင်သည့်ဆိုးဆေးများအားဝါဂွမ်းဆေးရာတွင်အသုံးပြုသည်။ နိုင်လွန်ဆေးဆိုးခြင်းအတွက် (ပိုမိုမြန်ဆန်သော) အက်စစ်ဆေးဆိုးများကိုအသုံးပြုသည်။ ဆေးဆိုးရန်တိုက်ရိုက်ဆိုးဆေး (အစာရှောင်ခြင်း) ကိုလည်းသုံးပါ။
C, T / C, C / T ဆေးဆိုးခြင်း - လျှော်ဆေးဆိုးခြင်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်မွေးစားသည်၊ ပိုလီယက်စ်ကိုဆေးဆိုးပြီး၊ ဝါဂွမ်းကိုဆေးဆိုးသည်၊ polyester သည်လူစုခွဲသောဆိုးဆေးဖြင့်ဆိုးဆေးဖြစ်သည်။ ကားဆေးဆိုးခြင်း၊ ဆေးဆိုးခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ဆိုးဆေးများအသုံးပြုခြင်း (အစာရှောင်ခြင်း) လည်းရှိသည်။
A, အက်စစ်ဆေးဆိုးများ - နိုင်လွန်အထည်ကိုဆေးကြောရာတွင်အသုံးပြုသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်အရောင်မြန်စေခြင်း၊ အရောင်ပေါင်းစပ်မှုရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောဆိုးဆေးအသုံးပြုခြင်းကိုဂရုပြုရန်အစိုင်အခဲအရောင်ကိုအသုံးပြုသည်။ Fixing agent ကိုမလျော်ကန်စွာရွေးချယ်သည်။
ခ။ ဆေးကြောဆေးများဆေးကြောပါ။ ယေဘုယျအားဖြင့် VAT ဆေးကြောခြင်းအားအရောင်မြန်စေရန်အတွက်အသုံးပြုသင့်သည်။ စွန့်ကြဲဆေးဆိုးသူများလွှဲပြောင်းခြင်းနှင့်သူတော်ကောင်းတရားအစာရှောင်ခြင်းအထူးအာရုံစိုက်။
ကို C, ဓာတ်ပြုပြီးဆိုးဆေးများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆိုးဆေးများ: နိမ့်အပူချိန်ဆိုးဆေးများပိုင်။
၄ ယေဘုယျအားဖြင့် roller ခြောက်သွေ့ခြင်းနှင့်အဆက်အသွယ်မရှိသောခြောက်သွေ့ခြင်းသို့ခွဲခြား)
A, အဆက်အသွယ်ခြောက်သွေ့မရှိအဆက်အသွယ်လေမှုတ်စက်နှင့်ပုံသွင်းစက်မရှိ, ထည်နှင့်အပူပေးစက်အကြားအဆက်အသွယ်မရှိ, ခြောက်သွေ့၏ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်ရန်ထည်အပေါ်ပူလေထုမှုန်ရေမွှားအပေါ်မှီခို။ အဓိကအားဖြင့်အထည်ကိုယိုယွင်းနေခြင်းနှင့်ကြွယ်ဝသောခံစားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လျတ်လျှောလျှက်ရှိသောဆေးများကိုခြောက်သွေ့စေရန်အသုံးပြုသည်။ ကုန်ကျစရိတ် roller ခြောက်သွေ့ထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။ ခ။ စည်မှခြောက်သွေ့ခြင်း - အထည်သည်စည်နှင့်တိုက်ရိုက်ထိတွေ့နေပြီးထိုအ ၀ တ်ကိုခြောက်သွေ့စေရန်အတွက်စည်ကိုအပူပေးခြင်းဖြင့်ရရှိသည်။ အဓိကအားဖြင့်လိပ်ဆေးဆိုးခြင်းနှင့်အတိုင်ရောင်ခြည်ဆေးဆိုးခြင်းအတွက်ထုတ်ကုန်များ (ဥပမာနိုင်လွန်ပိုး၊ ပိုလီယက်စတာ၊ နိုင်လွန်အောက်စ်ဖို့ဒ်၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်ပိုလီယမ်စသည်) သည်ပိုးတန်းရှည်မျှော်စင်သည်စည်ခြောက်ခန်းခြောက်ခန်းတွင်ပထမဆုံးဖြစ်နိုင်သည် (သို့သော်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်နိုင်သည် ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခြောက်ခန်းခြောက် (လက်ကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမအဖြစ်) အလွန်ခြောက်သွေ့သော), ပြီးတော့ရေတိုးတက်စေရန်ရေအပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဖို့စက်ကိုသွား။ ခြောက်သွေ့တဲ့ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ
၅။ အလယ်အလတ်စစ်ဆေးခြင်း -
A. ဗဟိုစစ်ဆေးခြင်းသည်အထည်အမျိုးမျိုး၏အရောင်အမြတ်အစွန်းကိုစစ်ဆေးပြီးတွန့်ခြင်း၊ အရောင်ကွာခြားမှု (အရောင်ခြားနားချက်၊ ဆလင်ဒါခြားနားချက်၊ မထင်မှတ်သောကွဲပြားခြားနားမှု)၊ အရောင်ပုံစံ၊ အရောင်အစက်၊ အညစ်အကြေး၊ အမဲဆီကဲ့သို့သောအထည်မျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးကိုဂရုပြုရမည်။ , ချည်ဆွဲ, ယက်ဖိုင်, အတိုင်ချွတ်စသည်တို့ကိုခ။ ကုန်ကျစရိတ်များတိုးမြှင့်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ချို့ယွင်းထုတ်ကုန်အောက်ပိုင်းအပိုင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ခြင်းမှထိန်းချုပ်။ အထည်ပြီးသွားနှင့်ပြုပြင်ပြီးနောက်အချို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောထုတ်ကုန်များကိုပြန်လည်ပြုပြင်။ မရပါသို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ C. ထည်နောက်ပိုင်းအပိုင်းသို့မဝင်မီပြန်လည်စီစဉ်ခြင်းနှင့်ချုပ်ခံရကြလိမ့်မည်။
A. အပြီးသတ်ပြီးနောက်, ထည်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများအတော်လေးတည်ငြိမ်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျုံ့ခြင်း၊ အကျယ်၊ အတိုင်နှင့်ယက်ခြင်းသိပ်သည်းဆကိုပြောင်းရန်မလွယ်ကူပါ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ဒီဇိုင်းအပြီးသတ်အတွက်ဤအပိုင်းကိုနေဆဲ splash ရေ (ရေစိုခံ), ပျော့ပျောင်းသောအပေါ်ယံလွှာအပေါ်, နူးညံ့, မီးလျှံ - နှောင့်နှေး, antistatic, supersplash ရေ (teflon ကုသမှု) ကဲ့သို့ချောမွေ့အပေါ်ယံလွှာ, အလုပ်လုပ်ရန်အပြောင်းအလဲနဲ့အနည်းငယ်လုပ်နိုင်နေဆဲချွေးစီးဖို့အစိုဓာတ်ကိုစုပ်ယူနိုင်ပါတယ် အနံ့ကိုကာကွယ်ရန်ဘက်တီးရီးယားကိုတိုက်ဖျက်ပါ။ ခ။ setting မြင့်အပူချိန်ကြောင့်, setting ကိုမီနှင့်အပြီးအရောင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအထူးသဖြင့်အထူးသဖြင့်မီးခိုးရောင်, ကြည်းတပ်အစိမ်းရောင်, အလင်း Khaki စသည်တို့ကိုအချို့သောအထိခိုက်မခံအရောင်များကိုအထူးအာရုံစိုက်ရပါမည်ထုတ်ကုန်များနောက်ဆုံးအရောင်နှင့်အတူညှိရန်လိုအပ်သည်။ ။ C. ပုံသဏ္ingာန်အထူးသဖြင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်သော, အကျယ်, အတိုင်နှင့်ယက်သိပ်သည်းဆ, ကျုံ့, etc ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ (ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှာကြားမှုလျှော့ချရန်လိုအပ်ချက်မှာယေဘုယျအားဖြင့် ၃% အနေဖြင့်အ ၀ တ်လျှော်စက်နှင့် ၂% ကိုတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်) ပုံသဏ္effectာန်သက်ရောက်မှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောအဓိကအချက်များမှာအပူချိန်၊ အမြန်နှုန်းနှင့်အလွန်အကျွံကျွေးမွေးသောအစာဖြစ်သည်။ processing ပြုပြင်ခြင်းအမျိုးအစားများစွာနှင့်မိတ်ဆက်ခြင်း။
(၁) ရေထုထည်ဒီဇိုင်းကိုရေစိုခံ။ ရေစိုခံနိုင်သောဖုန်မှုန့်၊
ပျော့ပျောင်းသောချောမွေ့မှုကိုခံစားစေပြီးဒီဇိုင်းကိုချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေသည်ကိုဂရုပြုပါ။ ရေများများနှင့်ပျော့ပျောင်းသောထားများကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အထည်ကိုရေစိုခံနှင့်နူးညံ့စေသည်။ သို့သော်ပျော့ပြောင်းသူသည်ရေများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မည်။
(3) ဗဓေလသစ်ဒီဇိုင်းကိုအစိုင်အခဲကြိုး၏ထည်များအတွက်အဓိကအသုံးပြုသည်နှင့်မာကြောခံစားရပါစေ, အစေးအချို့ formaldehyde ပါရှိသည်, ရွေးချယ်ရေးအာရုံစိုက်သင့်သည်, ရေမှုန်ရေမွှားနှင့် resin set တစ်ချိန်တည်းလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, နှင့်ဗဓေလသစ်မှုန်ရေမွှားအေးဂျင့်တစ် ဦး မြှင့်တင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
မီးလျှံတားဆေးထည်၏မီးလျှံနှောင့်နှေး function ကို၏ဒီဇိုင်းကိုအပြီးသတ်တစ်ခုအရန်အခန်းကဏ္ has မှပါဝင်သည်, မီးလျှံနှောင့်နှေးရေဒီဇိုင်းကိုအပြီးသတ်ဖို့တစ်ချိန်တည်းမှာလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်, ဒါပေမယ့်ရေအေးဂျင့်၏ရွေးချယ်မှုအထူးအာရုံစိုက်ဖို့, မဟုတ်ရင်အကျိုးသက်ရောက်မှု မီးလျှံ၏ကြီးမားလွန်းသည်။
Antistatic မှအပြီးသတ်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်ထည်သည် antistatic ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုပြုလုပ်သည်။ ဒီဇိုင်းကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ရေများဖြင့်ဒီဇိုင်းဆွဲနိုင်သည်။ သို့သော်ရေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖြည့်တင်းနိုင်သည်။
အစိုဓာတ်စုပ်ယူခြင်းနှင့်ချွေးချခြင်းတို့သည်ဒီဇိုင်းကိုအပြီးသတ်နိုင်စေရန်အတွက်အထည်သည်ချွေးများကိုမြန်ဆန်စွာစုပ်ယူနိုင်စေရန်၊ အားကစားဝတ်ဆင်မှုများသည်သက်တောင့်သက်သာရှိစေသည်။ ရေနဲ့မလုပ်နိုင်ဘူး
ဒီနေ့ပိုလျှံလျှံသောရေအစုံ (teflon treatment ဟုလည်းခေါ်သည်) - ပိုမိုကောင်းမွန်သောရေစိုခံ၊ ဖုန်မှုန့်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော်လည်းရေနံကာကွယ်ရေးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့်သာမန်ရေဖြည့်ထားသောရေကန်များထက်ဖြစ်သည်။ ယေဘူယျအားဖြင့်ပြောရရင် the ည့်သည်က dupont tag ကိုတောင်းလိမ့်မည်။
A, Calensing ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုညှိပျော့ပျောင်းသောခံစားမှုထည် calensing မျက်နှာပြင်ပိုမိုပြားချပ်ချပ်, အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒါမှမဟုတ်ထည်ဖိုင်ဘာအကြားကွာဟချက်ကျဉ်းမြောင်းသို့မဟုတ်ကော်ပိုမိုမြင့်မားသောရေဖိအားအောင်မြင်ရန်နိုင်ပါတယ်ကော်မျက်နှာပြင်ပိုမိုချောမွေ့နှင့်လှပသောနှိပ်မျက်နှာပြင်တစ် ဦး ကတောက်ပစေ အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ပြက္ခဒိန်၏အချက်သုံးချက်မှာအပူချိန်၊ အမြန်နှုန်းနှင့်ဖိအားဖြစ်သည်။ Calendering သည်ထည်၏အရောင်ကိုပြောင်းလဲစေသည်။ C. ကော်သည်ထည်ကိုရေစိုခံ၊ အမှိုက်ခံ၊ လေ ၀ င်လေထွက်ကောင်းမွန်သောနှင့်အခြားလုပ်ဆောင်မှုများအပြင်အထည်ပေါ်ရှိအစိုင်အခဲမျှင်များကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ac acrylic (AC, PA ဟုလည်းလူသိများ)၊ PU ကော်၊ စုပ်ယူနိုင်သော၊ ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်ကော်၊ ပွင့်လင်းကော်၊ အဖြူကော်၊ ငွေကော်၊ အရောင်ကော်၊ ပုလဲကော်၊ သက်ဆိုင်သောကုန်ကြမ်းများကိုကော်ထဲတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့မှသာ၎င်းသည်ဆန့်ကျင်သောခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ မီးလျှံနှောင့်နှေးမှု၊
အီး။ ရေဖိအား၊ ခံစားမှု (အထူ၊ အပျော့နှင့်မာကျော)၊ ကော်တူညီမှု၊ အခွံခွန်အား၊ ရေထု (အဖြူရောင်)၊ အဖြူရောင်စသည်တို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်ဂရုပြုပါ။ ထို့အပြင် colloidal အမှုန်များ၊ ရေမျက်နှာပြင်တိပ် (PVC strip / PU strip) ပေါ်တွင်ကော်မျက်နှာပြင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအထူးဂရုပြုသင့်သည်။
8, PVC bonding: ကော်အထူ၏အထူကိုအာရုံစိုက်ပါ။
၉။ အခြားလုပ်ဆောင်မှု - ခြောက်သွေ့သော PU (စာရွက်စက္ကူ)၊
10. အဝတ်လျှော်ခြင်း - အချို့သောချည်ထည်၊ N / C၊ T / C တို့ကိုဆေးကြောသင့်သည်။ ရေဆေးခြင်းကိုသာမန်ရေဆေးခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းသောအဝတ်လျှော်ခြင်းနှင့်အင်ဇိုင်းရေဆေးခြင်း (ဝါဂွမ်းအထည်ပေါ်ရှိဆံပင်ကိုဖယ်ရှားခြင်း) အဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
၁၁။ နောက်ဆုံးစစ်ဆေးခြင်း - အချောထုတ်ကုန်များ၏အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးပါ၊ အဆင့်အတန်းသတ်မှတ်ပါ၊ ထုပ်ပိုးပြီးသဘောင်္တင်ရန်စီစဉ်ပါ၊ ယေဘုယျအားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းမှတ်တမ်းများနှင့်ကိုက်ညီသည့်စားပွဲကိုပြုလုပ်ပါ။ ဖောက်သည်များနှင့်ဆက်သွယ်နိုင်ရန်အတွက်ပြproblemsနာများသည်အရောင်းစာရေးအားအချိန်မီပြန်ကြားသင့်သည်။
ထည်အရည်အသွေးအပေါ်အခန်း iii အလေးပေး
1, width: ယေဘုယျအားဖြင့်ထိရောက်သော width ကိုဆိုလိုသည်။ pinhole width သို့မဟုတ်ကော်ကော်သက်ရောက်မှုရှိသော width ကိုရည်ညွှန်းသည်။
2, အတိုင်နှင့်ယက်သိပ်သည်းဆ: တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များအတိုင်နှင့်ယက်သိပ်သည်းဆ၏တိုင်းတာခြင်းအာရုံစိုက်ရပေမည်။
3, ယက်ကွေး: ယေဘုယျဇယားကွက်အထည်ပိုးကွေးလိုအပ်ချက်များကို 3% ထက်မပိုစေရမည်, လွင်ပြင်အထည်ယက်ကွေး 5% ထက်မပိုစေရလိမ့်မည်။
4. Shrinkage နှုန်း - ဆေးကြောပြီးသည့်အခါ meridional နှင့် zonal လမ်းကြောင်းများသို့အချောထုတ်ကုန်များ၏ကျုံ့နှုန်း။
၅။ ရေဖြန်းခြင်းဒီဂရီ: ISO ကိုဒီဂရီဖြင့် (၅၀ ဒီဂရီခြားနားချက် - ၁၀၀ ဒီဂရီကောင်းသော) သို့မဟုတ် AATCC အဆင့် (၁ အဆင့်ခြားနားချက် - ၅ ဒီဂရီကောင်းသော) ဖြင့်တိုင်းတာသည်။ AATCC အဆင့်3သည် ISO အဆင့် ၈၀ ဒီဂရီနှင့်ညီသည်။
6, အရောင် Fast: ဤသည်အလွန်အရေးကြီးသောညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်, သူက (အရောင်အစာရှောင်ခြင်းမှေးမှိန်နှင့်အတူအရောင်အစာရှောင်ခြင်း), ရေကိုခံနိုင်ရည်အစာရှောင်ခြင်း (ညှိုးနွမ်းရ, အရောင်နှင့်အတူစွန်း), နေရောင် (မှေးမှိန်) အရောင်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်ပွတ်သပ်မှုပါရှိသည်ပါဝင်သည် အဆင့်ကွဲပြားမှု (1 ~ 5) ဖြင့်တိုင်းတာသကဲ့သို့, ညှိုးနွမ်း, အရောင်နှင့်အတူစွန်း), ချွေးဖို့အစာရှောင်ခြင်း (မှေးမှိန်ဖြစ်လာအရောင်နှင့်အတူစွန်း), သူတော်ကောင်းတရားအစာရှောင်ခြင်း, pad ပါဆိုးဆေး, etc ။
၇။ ခွန်အား - ဆန့်ဆန့်မှု၊ မျက်ရည်နှင့်ဆုတ်ဖြဲခြင်းစွမ်းအား (kg / cm2) ။
၈။ ရေဖိအားခံနိုင်ရည် - ရေဖိအားခံနိုင်စွမ်း (ရေစိုခံဒီဂရီ) ကဲ့သို့သော 2000mm / H2O (mm ရေကော်လံ)၊ တန်ဖိုးမြင့်လေလေရေစိုခံစွမ်းဆောင်ရည်။
၉။ အစိုဓာတ်ကိုထိုးဖောက်ခြင်း - ယူနစ် g / M2 * နေ့ဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီအတွင်းအချို့သောအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆများဖြင့် ၁ စတုရန်းမီတာထည်ကိုဖြတ်သန်းသွားသောရေ၏အရည်အသွေးကိုညွှန်ပြသည်။
၁၀။ ရေနံယိုဖိတ်မှု။ teflon processing ထည်အတွက်စမ်းသပ်မှုအညွှန်း၊ ၅ တန်းခွဲခြားထားသည် (၁ တန်းခြားနားချက် - ၅ တန်းကောင်း) ။
11, မီးလျှံနှောင့်နှေးစွမ်းဆောင်ရည်အပြင်, anti- static, anti-ultraviolet နှင့်အခြားစမ်းသပ်မှု၏ဝိသေသလက္ခဏာများအပြင်, သူတို့ကစမ်းသပ်ဖို့လမ်းရှိသည်ဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖွဲ့အစည်းကလိုအပ်ပါတယ်, ဒီမှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်မဟုတ်။
post အချိန်: ဖေဖော်ဝါရီ -26-2020
10F၊ Shanya အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစင်တာ၊ ဖူကျိုးအဆင့်မြင့်ဇုန်၊ ဖူကျူမြို့၊ ၃၅၀၁၀၈၊ ဖူကျန့်၊ တရုတ်